MacOS High Sierra GM hadda waa loo heli karaa qof walba | Waxaan ka socdaa mac
MacOS High Sierra GM hadda waa loo heli karaa qof walba
Ragga ka socda Cupertino ayaa hadda sii daayay nooca "kama-dambaysta ah" ee noocyada beta ee dhammaan isticmaaleyaasha doonaya inay ku rakibaan Mac-ga. Noocani oo loo yaqaan GM (Golden Master) waa nooc aan u tixgelin karno inuu yahay kii ugu dambeeyay ka hor inta aan la sii deyn nooca ugu dambeeya ee la filayo inuu yimaado Sebtember 25.
Qof kastaa wuxuu ku rakibayaa GM-ka Mac-da maxaa yeelay sidoo kale waxaa lagu heli karaa nooca loogu talagalay isticmaaleyaasha ku jira barnaamijka beta dadweynaha iyo sidoo kale sidoo kale kuwa horumariya ee leh xisaab rasmi ah
Talaadadii la soo dhaafay ayaa nuxurkiisu ahaa waxba lagama tusin noocyadan cusub ee softiweerka ah markii dambena Master Master ayaa loo bilaabay dadka isticmaala macruufka. Maanta waxaan horeyba u helnay nooca GM-kan oo loo heli karo macOS High Sierra 10.13.
Xaqiiqdii, isbeddelada la xiriira qaabkii hore ee beta lama ogaan karo laakiin waxaa iska cad in GM-yadaas aan wax isbeddel ah lagu darin, xasilloonida iyo amniga ayaa si fudud looga raadsanayaa soo bandhigidda nooca ugu dambeeya ee imaan doona maalmo yar, waa inay sidoo kale waxaa la sheegay in noocaan GM ah iyo nooca ugu dambeeya ee aan yeelan doono 25-ka bishan Way siman yihiin.
Sida aan wada ogsoonahay macOS High Sierra waxay la timaadaa tikniyoolajiyad cusub si Mac ka dhigto mid aad u awood badan, xasiloon oo ka dhakhso badan. Waxaa intaa dheer, waxay aasaas u tahay hal-abuurnimada mustaqbalka iyada oo la taageerayo EVC, heerka cusub ee fiidiyowga, iyo nidaamka maareynta faylka cusub ee APFS. Marka la soo koobo, waxaan wajaheynaa nooc si joogto ah u socda marka la eego isbedelada bilicsanaanta, laakiin aad muhiim ugu ah hawlgalka Mac-dayada iyo Mac-da mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » MacOS High Sierra GM hadda waa loo heli karaa qof walba
Waad salaaman tihiin, sideen u soo dajisan karnaa.
Waxaan haystaa betas lagu rakibay sidii horumariye oo GM iima uusan dhaafin.
Mar labaad ayaan soo dejistay astaanta beta oo ku jirta Mac App Store oo aniga uun baa iga boodda (in aan hadda soo degsanayo) Beta. Waa inaan lagu magacaabin GM ama Master Master maadaama kani uusan aheyn Beta. Ha sameyn
Waxaa lagala soo baxaa App Store
.. waa inay soo dejiyaan .. ma "boodo" .. waa 10.13 Beta La Dhisay (17A362a) oo ka soo rakibo xoq.
Jiilka shanaad ee Apple TV ayaa soo baxa oo lumiya isku xirnaanta
Sanduuqa cusub ee lacag la'aanta ah ee AirPod-yada laga heli karo Diisambar 79 euro